Izakhamuzi eziningi ezisemadolobheni ukwakha futhi uthenge engadini yabo. Kumnandi ngakho ehlobo ukuba bawushiye lowo muzi, ukumba emhlabathini, uphumule emoyeni opholile. Ngaphezu kwalokho, kuyinto evamile kakhulu futhi ngokuvamile abahlala ngaphandle komuzi. Garden design indlu noma engadini zingase zishintshe kakhulu. Isimo kuphela uma kukhethwe - egcekeni kufanele kube ntofontofo oyisebenzisayo. Ukusebenzisa ingxenye umhlobiso izinto ezifana engadini ifenisha, anezele zokuhlobisa kanye ifomu encane yezakhiwo.
Lawa mafomu encane futhi gazebos. Bangakwazi ezenziwe ngezinto ezahlukene. Ngokusho ukucushwa zalezi zakhiwo futhi zingase zishintshe kakhulu. Konke kuncike fantasies kanye nomnikazi isifiso indawo. Indaba Yiqiniso, ukukhetha okuhle kakhulu zemvelo futhi eco-friendly. Ngakho-ke, abaningi ekwakhiweni emadokodweni bakhetha ukusebenzisa izinkuni. Isibonelo, akha pergolas lwemishayo, amabhodi, njll Izinkuni - impahla angabacwasi ezishibhile futhi ezingokoqobo, kodwa inawo inezici ezithile ezingathandeki. Okokuqala, ukhuni rots ngakhoke Kuthi esingaphansi, isibonelo, isitini noma ukhonkolo. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo ke ukunikeza ukuncipha okukhulu.
Konke lokhu singakugwema uma ukwakhiwa Gazebo ka laminated yokwakha yaseGrisi izingodo. Okubalulekile okunjalo a nge zonke izinzuzo izinkuni zemvelo nhlobo elingenalo amaphutha ayo. amabhodi softwood asetshenziselwa ukukhiqiza yayo. Basuke kusetshenzwe, omisiwe bese unamathela ndawonye ukuze amasongo siphelile babe perpendicular nomunye. Ngakho-ke, ethe njo ukhuni laminated akusho wafiphaza noma shwabanisa. Ngaphezu kwalokho, olumelana umswakama kanye bola.
Ngakho isinqumo esingcono esokuba ukwakhiwa ibha Gazebo. Projects arbors enjalo kungaba futhi ngaphandle kokubonisana nomkayo. Bruce ukhululekile ngokwanele kule ndaba into. Kungenzeka ukwakha kokubili ukuma tetrahedral futhi eziyisithupha, noma ngisho ukukhetha umklamo eziyinkimbinkimbi.
Ukwakha Gazebo kusuka ibha kalula ngokwanele. Ngaphezu ibha uzodinga ukunciphisa asezindongeni ophahleni kanye ukufulela impahla. Ukuze isisekelo uzodinga usimende nesihlabathi. Ethe njo ugodo laminated - okokusebenza ukukhanya kakhulu futhi ngenxa yalokho esakhiweni esithile esincane aphume ke kungenziwa abeke pier isisekelo. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi suit Gazebo nebhande futhi setshe izinhlobo isisekelo.
Uphahla kungenziwa embozwe okunye okubalulekile enhle yesimanje. Ngokwesibonelo, sensimbi noma ondulin. Ukuma ophahleni ibha Gazebo ngokuvamile abakhethiwe itende, kodwa lungasetshenziswa, ngisho bamisa baphenduke futhi baguquke. Muva nje, kwaba imfashini kakhulu ukuhlomisa Gazebo ngaphakathi eziko noma izoso hlupha. Kulokhu, lo Arbor kungenziwa ngokuthi ekamelweni elincane yokudlela. Lapha ungakwazi umeme abangani bakho ukuze ujabule.
Pavilions lokhuni kungaba kokubili ovulekile futhi avaliwe. Esimweni sokuqala, kungaba ngisho nje ophahleni ezinsikeni ezine. Kuvalelwe kukhona izindonga kungenziwa ngezinkomishi ezinamekwe ngomthofu. Abanye abanikazi ngezinye izikhathi ukuchitha Ukushisa yabo.
Yakha i-Arbor ka laminated yokwakha yaseGrisi amapulangwe akunzima. Izindleko akuyona eqolo futhi zingaba lusetshenziswa uyayithanda. Izinkuni uyonika egumbini ikhubalo esiyingqayizivele.
Okukhethayo - Blinds
Zezinwele Original holiday